१ कोरिन्थी १२ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
१ कोरिन्थी १२:१-३१
१२ अब ए भाइहरू हो, परमेश्वरले दिनुहुने वरदानहरूका विषयमा तिमीहरू अनजान रहो भन्ने म चाहन्नँ। २ तिमीहरूलाई थाहै छ, पहिले तिमीहरूको आस्था बेग्लै हुँदा तिमीहरू बोल्न नसक्ने ती मूर्तिहरूको उपासना गरिरहेका थियौ अनि तिमीहरू त्यसरी नै चल्नेगर्थ्यौ। ३ त्यसैले तिमीहरूले यो थाह पाओ भन्ने म चाहन्छु, परमेश्वरको पवित्र शक्ति पाएर कसैले “येशू श्रापित हो!” भन्दैन अनि पवित्र शक्तिविना कसैले “येशू प्रभु हुनुहुन्छ!” भन्न सक्दैन। ४ अब वरदान विभिन्न किसिमका छन्‌ तर पवित्र शक्ति भने एउटै छ; ५ अनि सेवाको काम विभिन्न किसिमका छन्‌ तर प्रभु भने एउटै हुनुहुन्छ; ६ अनि कामहरू विभिन्न किसिमका छन्‌ तर सबै मानिसमा ती सबै काम गराउनुहुने परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। ७ तर हरेक मानिसमा पवित्र शक्तिको काम जे-जसरी प्रकट हुन्छ, त्यो सबैको फाइदाको लागि हो। ८ उदाहरणका लागि, कसैले पवित्र शक्तिले गर्दा बुद्धिको कुरा गर्ने वरदान पाएको हुन्छ, कसैले त्यही पवित्र शक्तिअनुसार ज्ञानको कुरा गर्ने वरदान पाएको हुन्छ, ९ कसैले त्यही पवित्र शक्तिबाट विश्वासको वरदान पाएको हुन्छ, कसैले त्यही शक्तिबाट निको पार्ने वरदान पाएको हुन्छ, १० अनि कसैले शक्तिशाली कामहरू गर्ने, कसैले भविष्यवाणी गर्ने, कसैले प्रेरित वाणीहरूको अर्थ बुझ्ने, कसैले विभिन्न भाषामा बोल्ने अनि कसैले विभिन्न भाषाहरूको अनुवाद गरेर बुझाउने वरदान पाएको हुन्छ। ११ तर यी सबै काम एउटै पवित्र शक्तिद्वारा हुन्छ अनि त्यसले आफ्नो इच्छाबमोजिम प्रत्येकलाई ती वरदानहरू बाँडिदिन्छ। १२ किनकि जसरी शरीर एउटै छ तर यसका अङ्गहरू धेरै छन्‌ अनि शरीरका अङ्गहरू धेरै भए तापनि शरीर एउटै हो, ख्रीष्ट पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। १३ साँच्चै, चाहे यहूदी हौं वा ग्रीक, दास हौं वा स्वतन्त्र, हामी सबैको एउटै पवित्र शक्तिद्वारा एउटै शरीरमा बप्तिस्मा भयो र हामी सबैले एउटै पवित्र शक्ति पायौं। १४ निस्सन्देह, शरीर आफै एउटा अङ्ग होइन तर त्यसमा धेरै अङ्ग हुन्छन्‌। १५ खुट्टाले “म हात होइन, त्यसैले म यो शरीरको भाग होइन” भन्दैमा के त्यो शरीरको भाग हुँदैन र? १६ अनि कानले “म आँखा होइन, त्यसैले म यो शरीरको भाग होइन” भन्दैमा के त्यो शरीरको भाग हुँदैन र? १७ यदि सिङ्गै शरीर आँखा हुँदो हो त केले सुन्ने? अनि सिङ्गै शरीर कान हुँदो हो त केले सुँघ्ने? १८ तर अब परमेश्वरले आफ्नो इच्छाअनुसार शरीरका प्रत्येक अङ्गलाई आ-आफ्नो ठाउँमा राख्नुभएको छ। १९ तिनीहरू सबै एउटै अङ्ग हुँदा हुन्‌ त के त्यो शरीर हुन्थ्यो र? २० अब अङ्गहरू धेरै छन्‌ तर शरीर भने एउटै छ। २१ आँखाले हातलाई यसो भन्न सक्दैन: “मलाई तिम्रो खाँचो छैन”; अथवा फेरि, टाउकोले खुट्टाहरूलाई यसो भन्न सक्दैन: “मलाई तिमीहरूको खाँचो छैन।” २२ बरु शरीरका कमजोर देखिने अङ्गहरू नै वास्तवमा झन्‌ नभई हुँदैन, २३ अनि शरीरका जुन अङ्गहरूलाई हामी त्यति आदरयोग्य ठान्दैनौं, त्यसैलाई झन्‌ बढी आदर दिन्छौं अनि अशोभनीय ठानेका अङ्गहरूलाई हामी झन्‌ बढी शोभा दिन्छौं, २४ जबकि हाम्रा शोभनीय अङ्गहरूलाई त्यत्तिको ख्यालै गर्नुपर्दैन। तर परमेश्वरले शरीरलाई यसरी मिलाउनुभएको छ कि थोरै आदर पाएको अङ्गले धेरै आदर पाओस्, २५ ताकि शरीरमा कुनै फूट नहोस्, बरु यसका अङ्गहरूले एकअर्काको उत्तिकै ख्याल गरून्‌। २६ अनि एउटा अङ्गले दुःख पायो भने अरू सबै अङ्गले सँगसँगै दुःख भोग्छन्‌; वा एउटा अङ्गले इज्जत पायो भने अरू सबै अङ्ग पनि सँगसँगै खुसी हुन्छन्‌। २७ अब तिमीहरू ख्रीष्टको शरीर अनि त्यसका विभिन्न अङ्ग हौ। २८ अनि परमेश्वरले मण्डलीमा प्रत्येकलाई आ-आफ्नो ठाउँमा राख्नुभएको छ, पहिलो, प्रेषित; दोस्रो, भविष्यवक्ता; तेस्रो, शिक्षक; त्यसपछि शक्तिशाली काम गर्ने; निको पार्ने; मदत गर्ने, नेतृत्व लिने अनि विभिन्न भाषाहरूमा बोल्ने। २९ के सबै जना प्रेषित हुन्‌ र? के सबै जना भविष्यवक्ता हुन्‌ र? के सबै जना शिक्षक हुन्‌ र? के सबै जनाले शक्तिशाली कामहरू गर्छन्‌ र? ३० के सबै जनाले निको पार्ने वरदान पाएका छन्‌ र? के सबै जना विभिन्न भाषाहरूमा बोल्छन्‌ र? के सबै जना अनुवादक हुन्‌ र? ३१ तर तिमीहरू अझ ठूलठूला वरदानहरू जोसका साथ खोजिरहो। अनि म तिमीहरूलाई अझ उत्तम मार्ग देखाउँछु।
१ कोरिन्थी १२